Waaheen Media Group » Shirkadda Telesom oo $500,000, oo Doolar saaka Suuqa galisay si ay Sarrif bararka hoos ugu dhigto
Browse:Home Videos Shirkadda Telesom oo $500,000, oo Doolar saaka Suuqa galisay si ay Sarrif bararka hoos ugu dhigto	Shirkadda Telesom oo $500,000, oo Doolar saaka Suuqa galisay si ay Sarrif bararka hoos ugu dhigto
Comments Off on Shirkadda Telesom oo $500,000, oo Doolar saaka Suuqa galisay si ay Sarrif bararka hoos ugu dhigto	Hargeysa(Waaheen) Maamulka Shirkadda Telesom ayaa manta si rasmi ah wasiirka Maaliyadda Somaliland uga aqbalay codsi ay usoo qadintay oo ay kaga dalbatay inay Suuqa galiyaan Lacag Doolar ah si uu qiimaha dolarka eek or usii kacayaa u jabo.
Talaabada ay Shirkadda Telesom qaaday ayaa Suuqa sarrifka lacagaha saaka ka dhigtay $100 in ay ku Iibsadaan sidaad boqol iyo afartan Kun oo shilling Somaliland ah, halka uu qiimuhu markii hore caga cagaynayey $ 100 lacag dhan sided boqol iyo sideetan kun oo shilling Somaliland ah, taasoo ka dhigaysa inay hoos u dajiyeen lacag dhan afartan kun oo Shilling.
Go’aanka ay Wasaaradda Maaliyadda iyo Telesom wada gaadheen ayaa meesha ka saaraya go’aamadii Golaha Wasiiradda iyada oo aanay labada dhinac midkood-na shaacin, balse waxa arrintan ka hor yimi sarriflayaashii kale iyo shirkadda Dahabshiil oo u arkay inaanay xal u noqonayn in marba go’aan aan lkoo wada dhamayn lagula tacaalo Suuqa Sarrifka, taasoo ay sheegeen khubaro ku xeel dheer inay arrimaha uga sii darayaan uun sida imikaba ku dhacday go’aamadii Golaha wasiiradda.
Sidoo kale, Shirkaddaha kale ee Diiday waxa ay kaga cabanayaan Xukuumadda talaabooyinka ay qaadayso oo aan ahayn kuwo loo dhan yahay, iyagoo tabaya in go’aankii hore ee Golaha wasiiraddu ay gaadheen ay kaga xanibtay baanka Malaayiin lacag ah, kuwaas oo aanay wali xukuumaddu u soo daynin.
Sida ilo wareed rasmi ah oo u dhuun daloola qaadacaada shirkaddaha kale sheegayaan waxa ku jirta go’aankan ay xukuumaddu ku soo riixday sarriflayaasha khasaare balaadhan oo ay sheegeen inaanay u babac dhigi Karin, maadaama oo aanu qorshahani ahayn mid meel mar ah.
Shirkaddaha kale ee sarrifka ayaa ku doodaya in wasiirka Maaliyaddu kaligeed go’aankan iska wadato, guddidii golaha wasiiradda looga saaray arrintanina aanay waxba ka ogyan, isla markaana ay damaanad qaadi weyday laba talo oo ay usoo jeediyeen, in ay shirkaddo ahaan xukuumadda amaahiyaan lacag Dayn ah oo Doolar ah si ay xukuumaddu hadhaw ugu soo celiso hase yeeshee ay ka diiday.
Lama garanayo shirkadda Telesom inay siiw adi doonto hawshan ay gashay maadaama shirkaddihii kaleba u arkaan inaanay khasaare u badheedhi Karin iyo inay halkaas ku hakin doonto, maadaama ay ku kaliyeysteen.
Si kasta ha ahaatee talaabada lagu tir-tiray go’aankii hore ee Madaxweynaha oo qiima dhan toddoba boqol oo kun ah u jaray inaanu qiimaha Doolarku ka badan ayaa u muuqda mid ay ka talaabsadeen wasaaradda Maaliyadda iyo shirkadda Telesom, maadaama qiimaha ay suuqa ku bilaabeen yahay sided boqol oo kun iyo wax ka badan Boqolkii doolar-ba.